Yeroo yaalii islaayidii jijjiiruu
LibreOffice'n yeroo islaayidii jijjiiraa ofmaatiif kenname akka qindeessitu si gargaara.
Islaayidoota qopheessi, sajoo addaa fayyadamuun agarsiisa jalqabi, islaayidicha tokkoffaaf waan himuu barbaaddee dalowatoota yaadaa keetiif himiif, kana booda gara islaayidii ottaa nuuti akka numaan darbaa deemi. Yoo $ office name'ntokkon tokkon islaayidootaaf agarsiisa kana galmeesse, kana booda yemuu islaayidii jijjiiraa ofmaatiin agarsisiicha mul'istu, sa'aatin kennamee akkuma galmaa'etti taa'a.
Sa'aati shaakala kenameen agarsiisa galmeesuuf
Pirezanteshiini banitii mul'ina Fooya'a Islaayidii jijjiiri.
Agarsiisa sajoo Kamshaa Mul'annoo Islaayidii irraaa Rehearse Timingsn cuqaasuun jalqabi. Islaayidii isa jalqabaa fi lakkaa'aa yeroo argii gam jalaatti argita.
Yemuu sa'aatin gara islaayidii birooti itti ce'amu ga'u agarsiisaa yeroo cuqaasi. Qindaa'ina durtii islaayidii kanaa eeguuf, agarsiisaa yeroo osoo hin taanee islaayidiicha cuqaasii. Islaayidoota pirezanteshiini keeti keessa jiran hundaan kanuma itti fufi.
LibreOffice name'n tokkon tokkon islaayidootaaf agarsiisa yeroo galmeessa. Pirezanteshiini Kan kee olkaa'i.
Qindaa'inoota Agarsisa Islaayidii
Title is: Yeroo yaalii islaayidii jijjiiruu